Imaski elahlekayo yezokwelapha ku ...
I-N95 maskandi certifi ...
[Uhlobo]: Uhlobo lwendebe yohlobo lweFolding [Ukusetshenziswa]: Yigqoke inkungu nehsa, ukuphuma kwezimoto, ikhishi, njll. [Umsebenzi]: Hlunga kahle zonke izinhlobo zezinhlayiya ezisemoyeni. [Sinezitifiketi]: Umthamo we-FDA / CE / Inxenye ye-NIOSH [Isikhathi]: Ukungcoliswa okuthambile-amahora angama-40, ukungcoliswa okulinganiselwe-amahora angama-30, ukungcoliswa okunzima kwamahora angama-20, ukungcola okukhulu kwehora-8 amahora. [amanothi]: 1.Uma imaski ilimele, imanzi noma ingaphefumuli kahle, sicela ubuyise imaskhi ngokushesha. 2. Musa ukuguqula, ukugeza noma ukushintshanisa imashi yokulahla ...
[Uhlobo]: Uhlobo lwendebe yohlobo lweFolding [Ukusetshenziswa]: Yigqoke inkungu egandayo nehaze, ukuphuma kwezimoto, ekhishini, njll. [Umsebenzi]: Hlunga kahle zonke izinhlobo zezinhlayiya ezisemoyeni. [Sinezitifiketi]: FDA / CE / Umthamo oyingxenye ye-NIOSH [Isikhathi]: Ukungcoliswa okunomusa-amahora angama-40, ukungcoliswa okulinganiselwe-amahora angama-30, ukungcoliswa okunzima kwamahora angama-20, ukungcola okukhulu kwehora-8 amahora. [amanothi]: 1.Uma imaski ilimele, imanzi noma ingaphefumuli kahle, sicela ubuyise imaskhi ngokushesha. 2. Musa ukuguqula, ukugeza noma ukushintshanisa ama-ma disponable ...
[Uhlobo]: GM1-AM GM1-BM [Ukusetshenziswa]: Yigqoke inkungu evuthayo kanye ne-haze, ukuphuma kwezimoto, ekhishini, njll. [Umsebenzi]: Hlunga kahle zonke izinhlobo zezinhlayiya ezisemoyeni. Hlangana nezinga le-GB / T 32610 -2016. [Sinezitifiketi]: I-FDA / CE [Isikhathi esijwayelekile]: Ukungcoliswa okuthambile amahora angama-40, ukungcoliswa okulinganiselwe-amahora angama-30, ukungcoliswa okunamandla kwamahora angama-20, ukungcola okukhulu okungama-8hours. [amanothi]: 1.Uma imaski ilimele, imanzi noma ingaphefumuli kahle, sicela ubuyise imaskhi ngokushesha. 2. Musa ukuguqula, ukugeza noma ukushintshanisa i-disposab ...
I-KN95 mask mask yezingane
[Imodeli yomkhiqizo]: isicaba umlomo womuntu, ikhala nomhlathi, ukuhlinzeka ngesithiyo esithile ngokomzimba ukuvimbela ukungena ngqo kwama-microorganisms nezinhlayiyana. [Indlela yokusebenzisa]: 1. Bheka ukuthi iphakethe lisesimweni esihle ngaphambi kokusetshenziswa, bese uqinisekisa usuku lokuphelelwa umkhiqizo; 2. Vula iphakethe bese ukhipha imaskhi. I ...
Imaski elahlekayo yezokwelapha ezingxenyeni ezi-3 nezingu-10 / isikhwama esiqinisekiswe i-FDA CE
Imaski yezokwelapha alahlwayo (inzalo)
Imaski yezokwelapha alahlwayo, izingqimba ezi-3, ama-50 / isikhwama
Imaski elahlekayo yezokwelapha yezingane
Imaski yokuhlinza elahlayo yezokwelapha (inzalo)